onion Archives | Kendrabindu Nepal Online News
31118706 963325 7440751 22714630
पैसा भन्दा प्याज प्यारो ! चोरले पसल फोडेर प्याज चोरे, पैसा चोरेनन्
पछिल्लो समय बंगलादेश र नेपालमा होइन भारतमा पनि प्याजको भाउ आकासिएको छ । भारतले प्याज निर्यात नै बन्द गरेको छ। नेपालमा प्याज र कुखुराको मासुको मूल्य हाराहारीमा पुगेको छ। प्याजको भाउ बढेसँगै चोरले समेत पैसाको सट्टा प्याज चोर थालेका छन्।
१२ मंसिर २०७६, बिहीबार १२:५३	१२ मंसिर २०७६, बिहीबार १२:५३
प्याजको भाउ अकासिएपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको भान्छामा समेत प्याज पाक्न छोडेको छ । महंगीका कारण मानिसहरुले प्याजको उपभोग नै गर्न सकिरहेका छैनन्। केही समयअघि प्रतिकेजी ३० टका रहेको प्याजको भाउ बढेर आज २ सय ६० टका पुगेको छ।
२ मंसिर २०७६, सोमबार १५:३९	२ मंसिर २०७६, सोमबार १५:३९
प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ पर्ने प्याज अहिले १३० रुपैयाँ !?
प्याजको मूल्य बढेपछि उपभोक्ता मारमा
५ पुष २०७४, बुधबार ०७:०१	५ पुष २०७४, बुधबार ०७:०१